>စွန့် ဦးတီထွင်သူများ | ချမ်းလင်းနေ
Filed under: ဗဟုသုတ, ဆောင်းပါး —3Comments
> ဒီခေါင်းစဉ်ဘာကြောင့်ပေးရလဲဆိုတော့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေက မိတ်ဆွေတို့သိပြီသား ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမယ် ကမ္ဘာမှာပထမဆုံးသော တီထွင်သူတွေရဲ့အကြောင်းပါ။သူတိုတွေဘာတွေကိုတီထွင်ကြလဲ၊ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေတွေ့ရလဲဆိုတာတွေပါ။တစ်ချိုအကြောင်းအရာတွေ မှားခဲ့ရင်ခွင့်လွှတ်ပြီးအမှားပြင်ပေးကြပါ။
အင်း………………ဘာအကြောင်းကစပြောရမလဲ…?????? ဟာ….ကွာမထူးပါဘူး။ ငါအခုကိုင်ပြီးစာရေးနေတဲ့ ဘောပင်အကြောင်းပဲ ရွှီးရင်ကောင်းမယ်။(စာရေးရင် ဘောပင်နဲ့အရင်ရေးချရတာ မဟုတ်ရင်စာရိုက်နေရင်းကိုပြောချင်တာတွေပြောက်ကုန်ရောသိတယ်မှတ်လားလိပ်ကတောင်ဆရာခေါ်ရတယ်..
အေဖိုးတစ်မျက်နှာနှစ်ရက်)။ရွှီးတယ်ဆိုလို့ပေါက်ကရမထင်ပါနဲ့။ နယ်နယ်ရရမဟုတ်ပါဘူး အလယ်ကမလှပါ။အမှုမဲ့မှတ်မဲ့ဟိုချောင်းဒီချောင်း(စာအုပ်နဲ့wikiဆိုက်ပါ။သမီးရည်းစားအတွဲချောင်းတာမဟုတ်ဘူး။၀ါသနာမပါဘူး။ ဟဲဟဲ..ခင်ဗျားတို့အနော့်ကိုမယုံဘူးမှတ်လား)။ကဲကဲပြောနေတာာကြာပါတယ်………ကဲရွာစားရေ…
>အခုမှသိပြီ ဘောပင်ဆိုတာ?????? 😛
>ဆယ်တန်းအောင်ပြီးစတုန်းက ရှားပါးစပြုနေတဲ့ ဖောင်တိန်နဲ့ စာတွေရေးတယ်၊ ဒိုင်ယာယီပေါ့၊ အဲဒီကတည်းက စာတွေရေးချင်နေခဲ့တာ။သားရေနယ်သမားက ဘယ်လိုကြောင့်ဘောပင်တီထွင်ပါလိမ့်နော်။
« >ကိုငှက်အမှတ်တရ – ၁
>Buddha Bar »